Andres Iniesta oo Magacaabay Cayaaryahan Chelsea oo uu jeclaan lahaa in uu Maalin un ka Garab Cayaaro? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Andres Iniesta oo Magacaabay Cayaaryahan Chelsea oo uu jeclaan lahaa in uu Maalin un ka Garab Cayaaro?
Published on November 1, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(02-11-2018) Cayaaryahankii hore ee kooxda kubada Cagta Barcelona Andres Iniesta ayaa shaaca ka qaaday Magaca Cayaaryahan uu sheegay in uu jeclaan lahaa in uu ka Garab Cayaaro kaas oo hada ka tirsan naadiga dalka England ee Chelsea.
Andres Iniesta oo hadda ka Cayaara Horyaalka dalka Japan ayaa shaaca ka qaaday in uu jeclaan in uu maalin un ka Garab Cayaaro Xiddiga dalka France ee N’Golo Kante kaas oo uu sheegay in uu yahay Cayaaryahan aan caadi ahayn isla Markaana uu jecelyahay Cayaaryahan kastaa in uu ka Garab cayaaro.
N’Golo Kante oo koobka aduunka la qaaday dalkiisa France ayaa ka mid ah Cayaartoyda ugu fiican caalamka oo dhan gaar ahaan kuwa ka cayaara Khadka dhexe waxaana Andres Iniesta sheegay in ay adagtahay in kooxi hesho isaga oo kale.